Madaxweyne Trump muxuu ka yidhi Askari Maraykan ah oo xalay lagu dilay weerar ka dhacay Soomaaliya? | puntlandi.com
Madaxweyne Trump muxuu ka yidhi Askari Maraykan ah oo xalay lagu dilay weerar ka dhacay Soomaaliya?
Askari katirsan ciidamada si gaarka ah ee tabaran ee Maraykanka ayaa lagu dilay afar kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray howlgal ka dhan ka ah argigixisada oo ay ciidamada Maraykanku ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya, sida lagasoo xigtay milatariga Maraykanka.
Waa markii ugu horeysay oo Maraykanku si rasmi ah u shaaciyo dhimasho askartiisa dagaalka kaga jirta Qaarada Afrika, tan iyo markii afar kamid ah ciidamada Maraykanka lagu dilay weerar ka dhacay Niger bishii Actobar.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, ayaa tacsida askarigaan kusoo daabacay bartiisa Twitterka habeenkii xalay oo jimco ahayd, wuxuuna ku tilmaamay geesi dalkiisa ka baxay.
Dhimashadiisa askarigaan ayaa ka dambeysay kadib marki ciidamada Maraykanka oo ay wehliyaan kuwa Soomaaliya iyo Kenya ay xalay howlgal lka dhan ah Alshabab ka fuliyeen degaanada Jubbaland, saacaddu markay ahayd labadii habeenimo.